Manazava ny fomba fijerena sy ny fanitsiana ny pejy miaraka amin'ny votoaty dika mitovy ny Semalt Expert
Ny votoaty duplicate dia tsy fahampiana goavana raha ny filaharana amin'ny milina fikarohana. SEOdia dingana sarotra, izay mitaky asa toy ny marketing, tranokala mifandraika sy ny marketing ara-tsosialy. Na izany aza, manitsy duplicateMety ho sarotra ny votoatiny. Ny tena endrik'ity fomba fiasa ity dia:
Mitaky fiovana ara-teknika kely fotsiny izany
Manomboka manatsara ny fandaharana raha vao manitsy azy io
Ny mpamaky Google dia mamaky ny fanovana eo amin'ny tranokalanao haingana
Ny manam-pahaizana Semalt Tolotra nomerika, Igor Gamanenko manazava ny fomba hiasa amin'ny votoaty duplicate araka ny tokony ho izy.
Ny fomba amam-pitenenana maimaim-poana
Araka ny bilaogy webmaster google, ny lazan'ny tranonkalan'ny tranonkalanao na bilaogydia mihalefy rehefa azonao atao amin'ny URL maromaro - tableau cout de revient excel. Raha ny marina dia afaka mamorona pejy samihafa ho ambany ny votoaty mitovy amin'izany, ka dia mitombony sangisangaranao SERP amin'ny teny fototra sasany. Ny fikajiana ny fahefana dia mora indrindra rehefa mampiasa rohy miaraka amin'ny pejin'ny kanôna.
Tokony hampiorina ny rohy miaraka amin'ny loharano tsotra 301 eo amin'ny tranonkala voalohanyka ny endriky ny rohy rehetra dia manondro pejy mitoraka. Vokatr'izany dia mihamaro ny fahefana sy ny fifamoivoizana amin'io pejy io,izay mamoaka izay tiany hapetraka.
Mamaritra ny votoaty duplicate
Mora ny hahafantarana raha manana olana amin'ny votoaty dika mitovy ianao. Mankanesa fotsinyNy karoka fikarohana tianao indrindra tahaka an'i Google (na ny iray izay manatsara anao), dia midira amin'ny tranokala: yoursitename.com. Rehefa pejy maromaro manondro nyNy votoatiny dia misy lisitra, manana rohy duplicate ianao. Ity tranga ity dia midika fa ny pejy manokana, na ny vokatra, dia mahazo vintana maroao amin'ny Google bots..
Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny fitadiavana votoaty duplicate dia mamantatra ny isan'ireo zavatrana pejy voalazan'ny Google. Pejy iray misy ny marika kanônika dia mety hiteraka fanalefahana. Ny porofo amin'izany dia ny hoe mety ho ambony noho ny sasany izanyireo vokatra mbola ambany amin'ny iray, izay tsy voasokan'ny Google.
Amin'ny tranga hafa, Google dia mety hamoaka valiny vokatry ny vokatra mihoatra noho izay azonaoao amin'ny tranonkalanao. Raha betsaka kokoa ny isan'ny valin'ny fikarohana momba ny isan'ireo pejy Internet anao, dia misy ny fahafahana manana rohy duplicate.Rehefa manova ny tranokalanao dia mety haharitra herinandro maromaro hanavao ireo pejy rehetra izay mety ho 800,000 mahery. Ity vokatra ity dia manazava ny antony aNy diso 404 dia mety hiarahaba ireo mpiserasera rehefa tsindriana ny vokatra amin'ny URL taloha.
Ny fomba hanitsiana ny votoaty duplicate
Tamin'ny voalohany, ny fanakanana ny mpikirakira web Google tamin'ny fampiasana rakitra tsotra robots.txt no tsara indrindrafomba hiatrehana ity toe-javatra ity. Na izany aza, ity trangan-javatra ity dia tsy mampitombo ny fahefana sy ny laza eo amin'ny pejy kanônika. Mbola misy ny rohyna dia misoroka ny sazy aza ianao. Na izany aza, ny fahombiazan'ny SEO dia tsy manatsara.
301 redirects ao Apache no fomba tsara indrindra ahafahana manitsy ireo teny kanônika mandritra ny fotoana maharitra.Ny redirects dia mahomby kokoa noho ireo teny kanônika. Ny famongorana ireo sokajy ao amin'ny votoatin'ny tranonkalanao dia manampy amin'ny fananganana iray ho an'ny fanovana iray,izay vahaolana azo itokisana sy maharitra. Ohatra, raha tokony hamorona site.com/category1/product1, ampiasao site.com/product1 fotsiny.
Amin'ny ankapobeny, ny trosa fototra ao ambadiky ny fanamafisana ny votoaty dika mitovy dia mitodika manodidina ny backlinks.Rehefa manondro pejy iray misy votoaty dika mitovy ny rindran-tserasera, dia matetika izy ireo no mampidina ny laharana ary koa manimba ny fiovanao.Ny maha-zava-dehibe sy ny fahefan'ny votoaty duplicate dia marefo. Noho izany, ny teknika voalaza etsy ambony dia tokony ampiharina mba hisorohanaSazy algorithm Google.